OREGANO (OREGANO): GURYAHA WAXTARKA LEH IYO KA HORTAGGA - DAAWADA DADWEYNAHA
Oregano - dhirta geedaha badani, oo ku baahsan dunida oo dhan. Mawduucyadani waxay ku dabooshaa cirifka, cidhifyada, kaymaha iyo meelaha dabiiciga ah. In badan oo dawlad-goboleed, oregano waxaa lagu beeray ujeedada codsiga dheeraadka ah ee sifooyinka kala duwan. Marka loo eego baahida loo qabo dhirtaas, waxay qabatinno, waxay ka duwan tahay tiro ka mid ah caleemaha oo ah mid aan caadi ahayn oo ka mid ah guryaha muhiimka ah.
Dhaqankani wuxuu leeyahay magacyo badan, sida Ladanka, zenovka, oregano, hooyo iyo kuwa kale, laakiin gadaashooda oo dhan waxay qarsoon yihiin oregano oo loo yaqaan qof kasta.
Qaybta kiimikada ee oregano
Maaddaama ay ka kooban tahay kiimikada kiimikada, oregano waxay si fudud u tartami kartaa inta badan inta badan daawooyinka iyo alaabooyinka la yaqaan. Waxaa sabab u ah feejignaanta sare ee ka kooban qeybaha daawooyinka. Ujeedooyinka daaweynta, ubaxyada la qalajiyey iyo caleemaha dhirta ayaa si firfircoon loo isticmaalaa, iyadoo lagu saleynayo taas oo ay soo saartaan tufaax iyo aqueous tinctures iyo decoctions.
Oregano waxaa kale oo lagu daraa saliidaha lagama maarmaanka ah, asiidhyada dabiiciga ah, phenols iyo coumarins. Maaddooyinka kala duwan ee ka kooban kiimikada la soo xulay ee oregano waxay muujinaysaa waxtarka sare ee daaweynta dhowr cudur, gaar ahaan haddii ay isku dhafan yihiin.
Sidaa darteed, geedo iyo ubaxyada dhirta ee geedka waxaa ku jira 1.5% saliidaha lagama maarmaanka ah, taas oo ka kooban alkohol, carvacrop, thymol; jinniyo lacag la'aan ah; geranyl acetate. Inta lagu jiro xilliga ubax ee oregano qarsoodi ah xeryahooda polyphenolic, glycosides. Waxyaabaha kale, iyada oo la adeegsanayo teknooloojiyada casriga ah iyo farsamooyinka casriga ah, fareerka, ascorbic acid iyo saliida dufanka leh, oo leh ur wanaagsan oo leh hanti gaar ah oo bactericidal ah, ayaa si firfircoon loogu sii daayaa warshadda.
Waa maxay oregano faa'iido leh
Caannimada iyo qaybinta ballaadhan ee warshadkan waqti badan waxay keentay su'aalo badan oo ku saabsan faa'iidada oregano loogu talagalay dadka.. Muuqaal badan oo ah qaababka casriga ah ee cawska, dad badan ayaa la yaabay oo la yaabay, taas oo aan la yaab lahayn. Isticmaalka oregano, thanks to ay faa'iidooyinka faa'iido, hadda waa si aan xad lahayn.
Waxyaabaha kala duwan, tinctures iyo decoctions oo ku salaysan geedkan daawo ayaa si firfircoon loogu isticmaalaa daaweynta cudurrada nidaamka dareemayaasha, mareenka caloosha, iyo dhowr cudur oo dabiiciga ah ee dabiiciga ah. Maaddooyinka firfircoon ee ka kooban kiimikada, waxay leeyihiin saameyn kicin ah dheecaanka casiirka gastric, iyo sidoo kale sida caadiga ah dheefshiidka, kordhiyo rabitaanka cuntada. Oregano decoctions, kuwaas oo inta badan waa argagax leh daawooyinka dabiiciga ah ee daawada, waa falanqeeye fiican. Saameynta xasaasiga ah, oo sidoo kale ka duwan xagaa daawo ah, hadana, waxay badanaaba ka caawisaa dadka ka cabanaya hurdo la'aan joogto ah iyo xiisad joogta ah.
Waxaa xusuus mudan in alaabooyinka oregano ee daawada loo isticmaalo xitaa daaweynta dhowr cudur oo maqaarka ah, sida cuncunka iyo boogaha. Inkasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo kala duwan oo ka mid ah sifooyinka wanaagsan ee geedaha, saamaynta ay ku leedahay jidhka ragga iyo dumarka badanaa way kala duwan yihiin, taas oo ah sababta ay u wanaagsan tahay in la fahmo faa'iidada oregano ee ragga iyo dumarka.
Ma taqaanaa? Oregano waa isha laga helayo tiro ka mid ah antioxidants kuwaas oo si firfircoon u taageera iyo ilaalinta nidaamka difaaca jirka, iyo sidoo kale ka hortagga gabowga gabowga. Maraqyada iyo geedaha dabiiciga ah ayaa si weyn u yareyn kara horumarinta kansarrada, atherosclerosis iyo cudurrada nidaamka wadnaha iyo xididdada. Waxaa ka mid ah sifooyinka cilmi ahaan loo xaqiijiyay ee oregano sidoo kale kala duwan saameynta anti-bararka iyo sedative. Sidaa darteed, sannadkii 2004, joornaalka cilmi-baarista ee "Alerts and Clinical Practitioner" ayaa daabacay natiijooyinka sannado badan oo cilmi-baaris ah, taas oo muujisay in isticmaalka oregano uu waxtar u leeyahay daaweynta xasaasiyadda xasaasiyadda.
Faa'iidooyinka oregano ee ragga
Iyadoo la raacayo faa'iidooyinka guud ee la aqoonsan yahay ee suuqyada daawooyinka, khabiiradu waxay tilmaamayaan calaamad muujinaysa saameynta oregano on jirka ee ragga. Marka lagu daro daaweynta habka caloosha iyo mindhicirrada, nidaamka dareenka dhexe, habka wadnaha iyo xubnaha kale, dhadhaminta daawada dhaqameed waxay sheegaysaa in infusions iyo decoctions ee oregano ka caawin kartaa nin in laga takhaluso sigaar cabista iyo tubaakada sigaarka.
Waa muhiim! Marka la eego daaweynta degdega ah, midna waa inuusan ka badbadin tirada miisaanka loo yaqaan 'deco-stroke' iyo 'fungal' oo ku salaysan oregano, maadama uu xooga saaro walxaha dabiiciga ah ee cawska uu yareeyo rabitaanka galmada ee qofka iyo / ama xitaa u horseedaya koritaan la'aan.
Guryaha waxtarka leh ee dumarka
Sanadihii ugu dambeeyay, dhakhtar kasta iyo dhakhaatiirta dadku waxay yaqaanaan faa'iidooyinka dumarka. Dawooyinka Oregano-ku salaysan ayaa ka caawin kara haweenka daaweynta cudurrada ginekoolojiyada aan xadidnayn. Tusaale ahaan, decoction wuxuu awoodaa in uu gabadha ka joojiyo xanuunka inta lagu jiro caadada caadada, iyo sidoo kale si caadi ah loo sameeyo caadada lumitaanka caadada.
Waxyaabaha kale, cawsku wuxuu ka caawiyaa kordhinta caanaha xilliga nuujinta. Isla marka ilmuhu dhasho, Oregano waxay ka caawisaa inay si deg deg ah ugu noqoto mid caadi ah, sida caadiga ah ee nolosha, iyo sidoo kale soo celiyo ilmo-galeenka oo caadiyan caadada u ah caadada. Khubarada qaarkood iyo dhakhaatiirta dadku waxay aaminsan yihiin in oregano, sifooyinka faa'idooyinka ah ee ay horeba u badan yihiin, waxay caawin karaan gabdhaha aan si firfircoon u kobcin xubnaha taranka iyo naasaha. Si kastaba ha ahaatee, ra'yigaan waxaa wadaagaya haween badan oo si shakhsi ah u tijaabiyey qalabkan.
Marka lagu daro dhammaan korka, marinka haweenka, daaweynta dhirta ayaa kaa caawineysa in ay ka soo baxdo xasaasiyad kulul oo xanaaq badan, sidoo kale waxay yareeysaa murgacashada iyo dareenka habka neerfaha.
Waa muhiim! Xilliga uurka, isticmaalka oregano (oregano) nooc kasta waa la mamnuucay, sababtoo ah kiimikada kiimikada ee geedaha waxaa ku jira walxo keeni kara dhicin.
Isticmaalka oregano ee daawada dabiiciga ah. Cunnooyinka
Marka lagu daro isticmaalka rasmiga ah ee daawada, daawada xayawaanka ee dhirta ayaa sidoo kale inta badan la isticmaalaa. Sannado badan, dhakhaatiirta iyo dhakhaatiirtu waxay si fican uga jawaabaan su'aasha "Cawska Oregano: maxay tahay", taas oo ah waqtiyadii ugu dambeeyay. Noocyada kala duwan ee dadka cuntada ku salaysan oregano waa mid aan loo dulqaadan karin, laakiin kuwa ugu caansan iyo kuwo waxtar leh ayaa loo yaqaanaa qof kasta.
1. Oregano waxyaabaha muhiimka ah ee shaaha
Si aad u diyaargarowdo, waxaad u baahan tahay 20 garaam oo hore loo diyaariyay, laamo la qalajiyey oo la jarjaray si ay u darsadaan oo u daadiyaan litir biyo ah. Waxaad ku dari kartaa lime qallalan oo yar iyo / ama naas. Ku shubay shaaha noocan oo kale ah 5-10 daqiiqadood, ka dibna si taxadar leh loo sifeeyo. 2-3 koob oo ah maalinta shaaha oregan-ku salaysan ayaa caawimaya nabarka mareenka caloosha iyo mindhicirka. Marka la eego walbahaarka, koob shaah ah ayaa dejin kara hababka wadnaha iyo neerfayaasha.
2. Faleebo qoyan
20 garaam oo qashin qoyan leh ayaa loo baahan yahay in lagu daadsho 40 ml oo khamri ah ama vodka iyo meel mugdi ah, oo qabow ah maalintii. Ka dib markaa, waxaa lagu adkeeyaa litir biyo ah. Saacad kaddib waxaad adkayn kartaa tincture. Teasyada oo ku saleysan fusoyinkaas (aan ka badnayn 4 koob maalintii) waxay gacan ka geystaan ​​joojinta xaako, qufac qufac, iyo sidoo kale daaweynta boronkiitada, oof-wareenka iyo cudurrada kale.
100 garaam oo ubaxyo qoyan la qalajiyey waa in lagu daraa 500 ml oo saliid saytuun ah, wax soo saarku waa in si fiican loo kariyaa oo loo dhigaa meel diiran, sifeeyaa kahor isticmaalka. Shidaalku wuxuu ka caawiyaa xannuunnada addimada, macbudyada, madax xanuun guud. Si tan loo sameeyo, xoqin halbeegga dhaqdhaqaaqyada yar yar 2-3 jeer maalintii. Intaa waxaa dheer, oregano waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee daaweynta qorshaha lichen. Haddii cuntooyinka dhaqanka dabiiciga ah aysan calaamadaha calaamadin, waa inaad isla markiiba la tashataa takhtar.
Ma taqaanaa? Isticmaalka joogtada ah ee oregano ee cuntada ayaa si weyn u kordhisa difaaca jidhka waxana uu gacan ka geystaa difaac dheeraad ah oo looga hortago bakteeriyada cudurada kala duwan. Sida laga soo xigtay natiijooyinka la daabacay ee tijaabooyinka shaybaarka lagu sameeyay xoolaha, saliidda oregano waxay hawlgelisaa habka wax soo saarka unugyada dhiiga cad. Intaa waxaa dheer, walxaha ku jira oregano waxay awood u leeyihiin inay burburiyaan qolofka ilaalinta ee dhowr fayrasyo, kaas oo xoojiya difaac.
Sida loo isticmaalo oregano ee karinta
Geedka Oregano waxaa inta badan loo isticmaalaa karinta cuntada sida bahal. Ukunta waxaa laga helaa dusha sare ee geedka, caleemaha iyo ubaxa. Isu ururinta xawaashka loogu talagalay isticmaalka culuunta dhammaadka xagaaga. Dalal badan, cunnooyinka qaran ee dhaqameedku waa mid aan macquul ahayn iyada oo aan la isticmaalin baastadaasi.
Tusaale ahaan, Belgium iyo Faransiiska, waxaa loo isticmaalay hilibka iyo maqaarka, iyo talyaaniga - ee pizza. Dhadhanka oregano (oregano) wuxuu bixiyaa ari aan caadi ahayn, oo lagu daro dhadhan qadhaadh ah oo jilicsan. Waxaa xusuus mudan in dhirta ay leedahay dhadhan qani ah, taas oo ah, waa wax ku filan in lagu daro tiro yar. Oregano inta badan waa qayb muhiim ah oo ka mid ah habka wax lagu kariyo ee loo isticmaalo beerka, pate, sausages. Guri-joogtu waxay si firfircoon u isticmaalaan qoyan la qalajiyey diyaarinta barandhada la dubay ee khudaarta. Intaa waxaa dheer, in ku dhowaad buug kasta oo cunto karinta guriga, waxaa la ogaaday in oregano si fiican u socdo oo la dubay, la dubay, suxuun la shiilay, iyo sidoo kale suugada iyo weelasha.
Cuntooyinka noocan oo kale ah waxaa lagu kala soocaa hab fudud, laakiin dhadhan aad u qanacsan. Iyadoo ku saleysan oregano waxay inta badan sameeyaan walxaha dabacsan ee suxuunta hilibka, ukunta iyo pies. Intaa waxaa dheer, marinade for pickles iyo pickles khudaarta ayaa sidoo kale inta badan ka kooban injirta this. Isku daridda oregano leh cuntooyin kale, sida basbaaska madow, basil, marjoram, rosemary, waa mid u dhow oo aan la saadaalin karin ugxan iyo dhadhankiisa.
Ma taqaanaa? On the territory of oregano gobolka muddo dheer lagu daray qaybaha dhaqanka ee diyaarinta kvass iyo biir ah. Cawsku wuxuu siiyey cabitaano gaar ah oo ay ka ilaalinayaan daaqada inta lagu jiro kaydinta dheeraadka ah.
Cawska Oregano, isticmaalka taas oo macquul ah ujeedooyin kala duwan iyo warshadaha, waxaa la ururiyaa inta lagu jiro xilliga ubax ee warshadda iyo bixinta buuxda ee burooyinkeeda ubax. Muddadani waxay dhacaysaa Juun-Agoosto. Waxaa xusuus mudan in ururinta la sameyn karo waqti dambe, laakin xilliga deyrta waxa ku jira maaddooyinka qaarkood, sida saliidaha lagama maarmaanka ah, hoos u dhaca, taas oo yaraynaysa tayada iyo faa'iidooyinka cawska oo dhan.
Sida caadiga ah, dusha sare ee dhirta waxaa lagu diyaariyaa cabbirka ilaa 20-30 cm. Qalabka cawska ah ku qalaji hawo furan ama gudaha gudaha hawo wanaagsan, laakiin hubso inaad ka ilaaliso qaybta shaqada ka soo baxa qorraxda tooska ah. Qalabaynta qallalan ee warshadda ayaa suurtogal ah in la caawiyo qallajiye qaas ah oo qallafsan, oo ilaaliya heerkulka hawada oo joogto ah oo ku saabsan 40 digrii. Waxaa xusuus mudan in marka heerkulkani uu ka sarreeyo geedi socodka qalajinta oregano, sifooyinka milkiilayaasha ah ayaa qayb ahaan lumay, sida saliidaha lagama maarmaanka u ah uumi baxa.
Nidaamka goosashada waxaa loo tixgeliyaa si dhammeystiran oo sax ah marka qashinka cawsku uu jebiyo marka wax yar la xoqdo. Rooti oregano ayaa leh baako basbaas ah, urta basbaaska iyo raadiyaha, dhadhanka dhadhanka. Ka fogow daawooyinka kale ee daawada.
Waa muhiim! Marka ilaalinta oregano, muddada ilaalinta hantida warshad waa ilaa hal sano. Ka dib markaa, isticmaalka qalabka shaqada waa mid aan loo baahneyn, sababtoo ah suurtagalnimada saameynta daawada. Waxaad kordhin kartaa nolosha shafka ah adoo caleenta cagaarka ku dari kara kuna ridaya weel hawo leh. Xaaladdan, oregano waxaa loo isticmaali karaa ilaa saddex sano.
Oregano: ka hortagga iyo waxyeelada
Iyadoo la raacayo faa'iidooyinka aan loo baahnayn ee dhirta dawadan ee xaaladaha qaarkood, isticmaalkaasi waa ka hortag. Marka loo eego tan, waa lagama maarmaan in la fahmo ma aha oo kaliya faa'iido udgoonida geedaha oregano, laakiin sidoo kale cawaaqibta iyo sida ay noqon karto.
First of dhan, waxaa haboon in la xusuusto in oregano ku jira xaddi badan oo walxo, sidaas darteed codsiga waa in lagu daraa dulqaad shakhsi ah iyo maqnaanshaha xasaasiyad. Isticmaalka xad-dhaafka ah ee oregano wuxuu yareeyn karaa rabitaanka galmada, ragga dhexdoodana xitaa waxay ka xanaajiyaan hoos-u-dhaca. Contraindications waxaa ka mid ah kiimiko sii kordhaya ee caloosha, iyo sidoo kale hypertension marxaladaha dambe.
Iyada oo ay sabab u tahay sifooyinka geedaha daawada dadweynaha, oregano waxaa loo arkaa inay tahay hab wax ku ool ah oo dhiirigelinaya dhicinta. Taasi waa sababta ay oregano udub dhexaad u tahay haweenka uurka leh. Saliidaha muhiimka ah ee ku jira oregano, xaaladaha qaarkood, waxay keeni karaan cuncun maqaarka iyo xuubka xuubka, sidaas darted miisaanka cunista cunidda waa in la xakameeyo oo la yareeyo.
Oregano - dhirta dhirta leh ee loo yaqaan 'set of unique properties of properties iyo codsiyada. Dawooyinka dhaqameed ee caadiga ah iyo kuwa dhaqameed, iyo sidoo kale cunto karinta waa wax aan macquul ahayn iyada oo aan loo isticmaalin warshadan. Hase yeeshee, inkastoo ay argagax tahay, taas oo ku dhow diismaamo, soodhaweynta looma ogola qof walba, markaa waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho dhirta yar.